ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်​က ​ဂျ​ပန်​နိုင်​ငံ ​တ​ရား​ရေး​ရာ​ဝန်​ကြီး​ဌာ​န​မှ ​ဒု​တိ​ယ​ဝန်​ကြီး​ဖြစ်​သူ H.E Mr. KUROKAWA Hiromy ​အား ​လက်​ခံ​တွေ့​ဆုံ | Union Attorney General’s Office Skip to main content
​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်​က ​ဂျ​ပန်​နိုင်​ငံ ​တ​ရား​ရေး​ရာ​ဝန်​ကြီး​ဌာ​န​မှ ​ဒု​တိ​ယ​ဝန်​ကြီး​ဖြစ်​သူ H.E Mr. KUROKAWA Hiromy ​အား ​လက်​ခံ​တွေ့​ဆုံ
​နေ​ပြည်​တော်၊ ​ဒီ​ဇင်​ဘာ ၁၂
​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ် ​ဦး​ထွန်း​ထွန်း​ဦး​သည် ​ဂျ​ပန်​နိုင်​ငံ ​တ​ရား​ရေး​ရာ​ဝန်​ကြီး​ဌာ​န​မှ ​ဒု​တိ​ယ​ဝန်​ကြီး​ဖြစ်​သူ H.E Mr. KUROKAWA Hiromy ​နှင့်​အ​ဖွဲ့​အား ​ယ​နေ့ ​မွန်း​လွဲ ၁၄:၀၀ ​နာ​ရီ ​အ​ချိန်​တွင် ​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်​ရုံး​ရှိ ​သံ​တ​မန်​ခန်း​မ​၌ ​လက်​ခံ​တွေ့​ဆုံ ​ခဲ့​ပါ​သည်။
​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​စဉ် ​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်​က ​တ​ရား​ဥ​ပ​ဒေ​စိုး​မိုး​ရေး​နှင့် ​တ​ရား​မျှ​တ​မှု ​က​ဏ္ဍ ​ပြု​ပြင်​ပြောင်း​လဲ​ရေး​အ​တွက် ​ဆောင်​ရွက်​လျက်​ရှိ​သည့် ​အ​ခြေ​အ​နေ​များ​နှင့် ​ပြည်​ထောင်​စု ​ရှေ့​နေ​ချုပ်​ရုံး​၏ ​ဖွဲ့​စည်း​ပုံ​နှင့် ​လုပ်​ငန်း​တာ​ဝန်​များ​ကို ​ရှင်း​လင်း​ပြော​ကြား​ပြီး​နောက် ​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်​ရုံး​နှင့် ​ဂျ​ပန်​အ​ပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာ ​ပူး​ပေါင်း​ဆောင်​ရွက်​ရေး​အေ​ဂျင်​စီ (JICA) ​တို့​သည် Record of Discussion (RoD) ​တစ်​ရပ်​ကို ​လက်​မှတ်​ရေး​ထိုး​၍ ၂၀၁၃ ​ခု​နှစ်​မှ ၂၀၁၈ ​ခု​နှစ်​အ​ထိ Capacity Development Project ​ကို ​ပူး​ပေါင်း​ဆောင်​ရွက် ​လျက်​ရှိ​ပါ​ကြောင်း၊ ​စီ​မံ​ကိန်း​ကာ​လ​အ​တွင်း JICA ​မှ ​ကျွမ်း​ကျင် ​ပ​ညာ​ရှင် (၃) ​ဦး​က ​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်​ရုံး​တွင် ​တွဲ​ဖက်​လျက် ​လုပ်​ငန်း​များ ​ဆောင်​ရွက်​လျက်​ရှိ​ပါ​ကြောင်း၊ JICA ​အ​နေ​ဖြင့် IP Law, Security Exchange Law, Company Law ​စ​သည့် ​စီး​ပွား​ရေး​ဆိုင်​ရာ ​ဥ​ပ​ဒေ​များ ​ရေး​ဆွဲ​ခြင်း၊ ​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်​ရုံး​၏ ​မ​ဟာ​ဗျူ​ဟာ ​စီ​မံ​ကိန်း ​အ​ကောင်​အ​ထည်​ဖော်​ခြင်း​နှင့် ​ဥ​ပ​ဒေ​အ​ရာ​ရှိ​များ​အ​တွက် ​လုပ်​ငန်း​ဝင်​သင်​တန်း​နှင့် ​မွမ်း​မံ​သင်​တန်း​များ ​ပို့​ချ​ခြင်း​တို့​တွင် ​ပါ​ဝင်​ကူ​ညီ ​ဆောင်​ရွက်​ပေး​လျက်​ရှိ​ပါ​ကြောင်း၊ JICA ​အ​ကူ​အ​ညီ​ဖြင့် ​ပ​ညာ​သင်​များ ​စေ​လွှတ်​နိုင်​ခဲ့​ပါ​ကြောင်း၊ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​၏ ​ဥ​ပ​ဒေ​ရေး​ရာ​က​ဏ္ဍ ​ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​အ​တွက် ​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်​ရုံး​နှင့် JICA ​တို့​အ​ကြား ​ဆက်​လက် ​ပူး​ပေါင်း​ဆောင်​ရွက်​သွား​မည်​ဖြစ်​ပါ​ကြောင်း ​စ​သည်​တို့​ကို ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ကြ​ပါ​သည်။
​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ​သို့ ​ပြည်​ထောင်​စု​ရှေ့​နေ​ချုပ်​ရုံး​မှ ​ဒု​တိ​ယ​ရှေ့​နေ​ချုပ် ​ဦး​ဝင်း​မြင့်၊ ​အ​မြဲ​တမ်း​အ​တွင်း​ဝန် ​ဒေါ်​နု​နု​ယဉ် ​နှင့် ​ညွှန်​ကြား​ရေး​မှူး​ချုပ် ​ဒေါက်​တာ​သီ​တာ​ဦး ​တို့​လည်း ​တက်​ရောက်​ခဲ့​ကြ​ပါ​သည်။
756734Since: 08/01/2013 - 19:50 Copyright © 2013 - 2017 Union Attorney General’s Office. All rights reserved. Powered by : Information Matrix